दुर्लभ के हो? यसलाई कसरी प्रयोग गर्ने? - सांप्रदायिक समाचार: अनलाइन व्यापार, थोक र B2B बजार समाचार
सम्पादकको पिक5सक्छ, 20213सक्छ, 2021 ईसा शार्लोट ब्लग, व्यापार, क्रिप्टोकरन्सी सेवा, सम्पादकको पिक
प्रयोगकर्ताहरूले खाता सिर्जना गर्न र विचित्र टोकनहरू प्रयोग गरेर आफ्ना सिर्जनाहरू बेच्न सक्दछन्।
दुर्लभ Ethereum blockchain मा चलाउँछ।
एकचोटि तपाईंले टोकन सिर्जना गरेपछि, तपाईं आफ्नो छवि वा भिडियो वा तपाईंको संगीत अपलोड गर्न सक्नुहुनेछ जुन तपाईंको टोकनहरू खरीद गर्ने व्यक्तिको लागि उपलब्ध गर्न चाहनुहुन्छ।
दुर्लभ के हो? - एक संक्षिप्त परिचय
यदि तपाईं क्रिप्टो अन्तरिक्षमा अत्यधिक अपडेट हुनुभयो भने, यो सम्भव छ कि तपाईंले Rarible शब्द र यसको सुरुवातको एक वर्ष भित्रमा सिर्जना गरेको प्रभावको बारेमा सुन्नुभयो। यो एक एनएफटी मार्केटप्लेस हो जुन २०२० मा सुरू गरिएको हो। यसको सुरू भएको एक वर्ष भित्र बजार २ ,2020, ००० अनौंठो खरिदकर्ता र दुबै $ २ करोडको ट्रेडिंग भोल्युममा पुगेको छ।
रैरिबलमा भाग लिने सेलिब्रिटीहरूको सूचीमा लिन्डसे लोहान, मार्क क्यूबन, र टायरा जस्ता प्रमुख नामहरू थिए। यो कलाकारहरू र सors्कलकहरूको लागि मनपर्दो भएको छ, र यसले सुरक्षाको तत्व पनि ल्याउँछ। आउने लाइनहरु मा, हामी Rarible राम्रो विवरण मा हेरौं, यसको प्रयोगहरु, र यसले कसरी काम गर्दछ।
यस्तो सम्पत्ति स्वामित्वको सट्टा, जेथाको बारेमा जानकारी ब्लकचेनमा भण्डारण हुन्छ।
गैर-फन्जीबल टोकनहरू के हुन्?
एक दुर्लभ जस्तो NFT बजार बुझ्नको लागि, यो फ्यागबिलिटी को अवधारणा बुझ्नु महत्त्वपूर्ण छ। फंगबिलीटी भनेको एक शब्द हो जुन ब्लकचेन टेक्नोलोजीको परिचय पछि बढ्दो प्रख्यातता फेला पर्‍यो।
संक्षेप मा, यदि एक सम्पत्ति Defensable मानीन्छ, यो सजीलो समान मूल्य को अर्को सम्पत्ति संग विनिमय गर्न सकिन्छ, र यो पनि सानो सम्पत्ती मा बिच्छेद गर्न सकिन्छ। फ्याग्बल सम्पत्तिको उत्कृष्ट उदाहरण भनेको संयुक्त राज्य अमेरिका डलर वा त्यस चीजको लागि कुनै अन्य आधिकारिक मुद्रा। १० डलरको नोट सजिलैसँग आदानप्रदान गर्न सकिन्छ, अर्को dollar १० वा १० प्रत्येक डलरको नोटको लागि। मान सबै परिवर्तन हुँदैन।
यदि हामीले विपरित अन्तबाट चीजहरू हेर्नु पर्छ भने, त्यहाँ केही "अद्वितीय" आईटमहरू छन् जुन कुनै अन्य प्रतिनिधित्व हुन सक्दैन। यसको एक राम्रो उदाहरण संग्रहणीय हुनेछ। त्यहाँ कलाको एक मिलियन टुक्रा हुन सक्छ, तर केहि पनि लियोनार्डो दा भिन्सी जस्तो को कलाकृति प्रसंस्करण को आनन्द तुलना गर्न सक्दैन।
एक NFT समान कुरा मान्न सकिन्छ ... तर blockchain / डिजिटल संसारमा। यस्तो सम्पत्ति स्वामित्वको सट्टा, जेथाको बारेमा जानकारी ब्लकचेनमा भण्डारण हुन्छ। यसले असंख्य सुविधाहरू ल्याउँछ जस्तै नक्कली कलाकृतिलाई रोक्ने, स्वामित्वको सजिलो हस्तान्तरण, अघिल्लो स्वामित्वको पारदर्शी प्रमाणिकरण, र पक्कै पनि, कलाकृतिको प्रामाणिकता स्थापना गर्न। यसले व्यक्तिहरूलाई यसलाई प्रशोधन गर्न कोठा पनि दिन्छ र वास्तवमा यसलाई शारीरिक स्थितिको रूपमा लिदैन, यसलाई आवश्यक हेरचाहको प्रकारलाई विचार गरेर।
NFT घटनालाई डिजिटल कला, संगीत निर्माण, गेमि assets सम्पत्ति, र भर्चुअल सम्पत्तिमा पनि ल्याउन सकिन्छ। दुर्लभ एक यस्तो प्लेटफर्म हो जसले NFT को सक्षम बनाउने सजीलो बिक्री र लेनदेन को सिर्जना गर्न सहयोग पुर्‍याउँछ। यो बताउन अतिशयोक्ति हुने छैन कि दुर्लभ लगभग फञ्जीबल टोकनहरूको लागि अमेजन जस्तै छ।
कसरी एक NFT प्लेटफार्म दुर्लभ काम गर्दछ?
धेरै जसो NFT बजारहरू दुर्लभको रूपमा उस्तै तरिकाले काम गर्दछन्। प्रयोगकर्ताहरूले खाता सिर्जना गर्न र विचित्र टोकनहरू प्रयोग गरेर आफ्ना सिर्जनाहरू बेच्न सक्दछन्। यो ती छविहरू, संगीत, र भिडियोहरू सिर्जना गर्नेहरूको लागि उपयोगी छ र तिनीहरूलाई लामो अवधिको लाभको लागि बेच्न चाहन्छ।
दुर्लभ यी सिर्जनाकर्ताहरूको लागि एक प्लेटफर्म प्रदान गर्दछ। NFT मार्केटप्लेस ईन्डिगोगो र Etsy को क्षेत्र मा कहीं राख्न सकिन्छ। एक तर्फ, कोष को एक खुलापन छ, र मान्छे आफ्नो मनपर्ने रचनाकारों को रचना वस्तुतः खरीद गर्न सक्छन्। अर्कोतर्फ, Etsy भागफल NFT प्लेटफर्ममा बिक्री मा राखिएको उत्पादनको विशिष्टता द्वारा ल्याएको छ।
रारिबलको सफलताको सबैभन्दा ठूलो प्रशंसापत्र मध्ये एक हो about १.1.75 million मिलियन कोष कोष यो केहि प्रतिष्ठित नामहरु जस्तै ParaFi, 1kx, CoinFund, र CoinBase बाट उठेको। जबकि यो फन्डि itself आफैमा ठूलो खबर हो तर यो तथ्य यो हो कि यसलाई क्रिप्टो अन्तरिक्षका केही ठूला नामहरूले समर्थन गरेको देखाउँदछ कि एनएफटी बजारहरू यहाँ रहनका लागि र नाफा कमाउनको लागि छन्।
Rarible को वित्त पोषण भएको देख्नु आश्चर्यजनक कुरा होइन। स्थापनाको पहिलो वर्षमा, १ मिलियन भन्दा बढी अनौंठो वस्तुहरू विरिबलमा टकसाल गरियो। करीव २ million लाख दुर्लभ टोकन सिर्जनाकर्ताहरू र सors्कलनकर्ताहरूलाई वितरित गरिएको थियो।
अनलकिंग सुविधाहरूमा दुर्लभ सुस्त र स्थिर छ। यसको स्थापना भएको months महिनाभित्रै, रेरिबलको बिक्रीको मात्रा 500००% ले वृद्धि भयो, जुन २०२० को महीनामा बिक्रीको २०,००० डलर पुगेको छ। ट्विटरमा १०,००० भन्दा बढी अनुयायीहरूको साथ यसको सामाजिक उपस्थिति पनि छ। यो देख्नु आश्चर्यजनक कुरा होइन कि हस्तियाँ उपस्थितिको कारणले।
तपाईलाई थाहा भएकै कुरा हो, दुर्लभ Ethereum blockchain मा चल्छ, र यसले मानिसहरुलाई टोकन मात्र सिर्जना गर्न को लागी संकल्पनात्मक बनाउन र एक दुर्लभ प्लेटफार्म जस्तै प्लेटफर्म निर्माण गर्न सजिलो बनाउँदछ।
NFT मिन्टिंग - दुर्लभको उत्तम प्रस्ताव ... उदाहरणका साथ
किनकि मानिस वा सिर्जनाकर्ताले दुर्लभ बजारमा आफ्नै टोकनहरू सिर्जना गर्दछ, यसलाई चित्रकला प्लेटफर्मको रूपमा बुझाउन सकिन्छ। यो दुर्लभ बाट एक अद्वितीय प्रस्ताव को रूप मा आउँछ किनभने अन्य एनएफटी बजार स्थानहरु कलाकारहरु बाट कलाकृति क्युरेट गर्न को लागी समय र प्रयास लिन्छ प्लेटफर्ममा राख्नु अघि; दुर्लभसँग कुनै मध्यस्थता वा अवधि छैन। कुनै पनि दुर्लभ मा आफ्नो टोकन निर्माण गर्न सक्दछ।
वेबसाइटहरूलाई ब्लगले के गर्‍यो भनेर यसलाई व्यापक स्वागतमग्न कदम मान्न सकिन्छ। बाढी गेट्सको यस उद्घाटनको साथ, युवा प्रतिभा र आगामी कलाकारहरूले पनि रेरिएबलमा आफ्नै टोकनहरू सिर्जना गर्न सक्षम हुनेछन्। फ्लिप पक्षमा, यसले स्केमरहरूलाई दुर्भावनापूर्ण साथ प्लेटफर्ममा संलग्न हुने अवसरहरू पनि खोल्दछ। दुर्लभले यस्ता जोखिमहरूलाई कम गर्न एक प्रमाणिकरण प्रक्रिया शुरू गरेको छ।
दुर्लभमा कसरी आफ्नै टोकन सिर्जना गर्ने?
दुर्लभमा टोकन सिर्जना गर्नु क्राइप्टो विश्वमा सायद सजिलो स engage्लग्नता मध्ये एक हो। तपाईंले गर्नुपर्ने भनेको उनीहरूको आधिकारिक वेबसाइटमा जानुहोस् र तपाईंको क्रिप्टो वालेट सिर्जना गर्नुहोस्। वालेट एकल क्लिकको साथ सिर्जना गर्न सकिन्छ। तपाइँ के बेच्नुहुन्छ मा आधारित, तपाईं या त एकल टोकन टकसाल वा बहु थपको साथ टोकन छनौट गर्न सक्नुहुनेछ।
एकचोटि तपाईंले टोकन सिर्जना गरेपछि, तपाईं आफ्नो छवि वा भिडियो वा तपाईंको संगीत अपलोड गर्न सक्नुहुनेछ जुन तपाईंको टोकनहरू खरीद गर्ने व्यक्तिको लागि उपलब्ध गर्न चाहनुहुन्छ। तपाईं मूल्य निर्दिष्ट गर्न सक्नुहुनेछ, तपाईंको टोकन नाम दिनुहोस्, विवरण दिनुहोस्, र रोयल्टी सम्बन्धी जानकारीका टुक्राहरूको बारेमा पनि कुरा गर्न सक्नुहुन्छ।
तपाईंले जानकारीका यी सबै टुक्राहरू दिए पछि, तपाईंले केवल 'सिर्जना वस्तु' मा क्लिक गर्न आवश्यक पर्दछ। तपाईंको वालेटले तपाईंलाई ग्यास शुल्कमा हस्ताक्षर गर्न र भुक्तानी गर्न आग्रह गर्दछ, जुन वास्तवमा, यो ब्लकचेनका स्रोतहरूको प्रयोगको लागि भुक्तान गर्ने शुल्क। त्यहाँ उदाहरणहरु हुन सक्छन् जहाँ ग्यास शुल्क बढी छ, तर प्रक्रिया यति सजिलो बनाउन को लागी धेरै रचनाकारहरु सहमत छन् कि यो यसको लायक छ। तपाईंको पाहुना शुल्कहरू न्यूनतम रहेको सुनिश्चित गर्न, तपाईंले आफ्नो NFT टकसाल गर्न सही क्षण छनौट गर्नुपर्नेछ।
व्यापार मोडल बिना कुनै व्यवसाय पूर्ण हुँदैन।
दुर्लभले कसरी पैसा कमाउँछ?
व्यापार मोडल बिना कुनै व्यवसाय पूर्ण हुँदैन। त्यहाँ बिभिन्न तरिकाहरू छन् जुनमा Rarible ले पैसा कमाउँछ। सीईओ र रेरिबलका सह-संस्थापक एलेक्सी फालिनको शब्दहरूबाट, बजारको सूचीको लागि शुल्क सेप्टेम्बर २०२० मा मात्र लागू गरिएको थियो। सुरुमा, रेरिबलमा लेख सूचीबद्ध गर्न नि: शुल्क उपलब्ध थियो।
जबकि लिस्टिंग शुल्क अपेक्षाकृत कम छ, रेरिबलमा सूचिहरूको संख्याले फ्ल्याट गर्दछ कि प्लेटफर्मले पर्याप्त नाफा प्राप्त गर्दछ। दुर्लभ स्थिति नै क्रिप्टो कलाको लागि एक प्रीमियम प्लेटफर्मको रूपमा र तिनीहरू क्रिप्टो अन्तरिक्षमा अन्य कोटीहरूमा विस्तार गर्न खोज्छन्। एक पटक तिनीहरूको स्थानमा स्केलेबिलिटि समाधान छ भने तिनीहरू पनि गैर-क्रिप्टो संसारमा आफैलाई सुरूवात गर्न चाहन्छन्।
शार्बलीहरुका लागि मात्र होइन तर अन्य क्रिप्टो व्यवसायको लागि सब भन्दा ठुलो चुनौती भनेको शताब्दीयौंदेखि अस्तित्वमा रहेको कुनै चीजलाई क्रान्तिकारी बनाउने नियामक परिदृश्य हो। स्वामित्व डिजिटल स्थानमा सारिएको छ, आईपी अधिकार र रोयल्टी व्यवस्थापन अझै कागज र घर्षण को एक विशाल मात्रा मा समेटिएको छ। यसको परिणाम प्रणाली अत्यधिक गैर तरल, नोकरशाही, र डिजिटल संसारको प्रगति भएको छ भन्दा पछाडि पछाडि छ।
विकेन्द्रीकृत लेजर टेक्नोलोजी मिलाउन कानूनी प्रणालीले बिस्तारै समात्दै, चीजहरू छिट्टै परिवर्तन हुन सक्दछन्, र NFT ले डिजिटल कला, खेल सम्पत्ति, टिभी कार्यक्रमहरू, संगीत, र संग्रहणीयहरू जस्तै डिजिटल सामग्री प्रतिनिधित्व गर्ने सन्दर्भमा नेतृत्व लिने अपेक्षा गरिएको छ। यसले यस्तो डिजिटल सम्पत्तिको लागि माध्यमिक बजार पनि खोल्छ, तरलताको सम्बन्धमा सामना गर्ने मुद्दाहरूलाई प्रभावकारी रूपमा सम्बोधन गर्दछ।
भविष्य - निष्कर्ष
Rarible द्वारा स्पार्कको रूपमा के शुरू गरिएको छ चाँडै नै blockchain मा सजीलो पहुँचयोग्य र वितरित डाटाबेस निर्माण गर्नेछ जसले कसैलाई सामग्री खोज्नको लागि अनुमति दिन्छ जुन व्यावसायिक र गैर-व्यावसायिक उद्देश्यका लागि पूर्ण रूपमा कानुनी हुनेछ, र खरीद पनि गर्न सकिन्छ। तुरुन्तै। यसले भौगोलिक अवरोधहरू पनि हटाउँदछ किनकि ब्लकचेन स्वभावैले विश्वव्यापी छ। यसले नक्कलको घटनाहरूलाई पनि हटाउन सक्छ, सम्पूर्ण प्रणालीलाई अधिक विश्वसनीय बनाउँदछ।
दुर्लभ अपेक्षा गर्दछ कि बजार निकट भविष्यमा १००% ले बढ्नेछ र आदर्श रूपमा, यो अनुमति रहित, समुदाय-शासित, र खुला हुनेछ। जब समुदाय बढ्न थाल्छ, चासो बढ्छ। यस समयमा यस समयमा, Rarible जस्ता प्लेटफर्मले व्यक्तिहरूलाई सामेल हुनको लागि प्रोत्साहन सिर्जना गर्दछ र जागरूकता बढाउन पनि मद्दत गर्दछ।
यो अचम्मको कुरा होइन कि धेरै भविष्य क्राइप्टो उद्यमीहरूले एनएफटी बजार निर्माणमा लगानी गर्ने विचार गरे। त्यहाँ न केवल विकासको लागि मात्र नाफाको लागि पनि पर्याप्त क्षमता छ। यसले रचनाकार वातावरण विकेन्द्रीकरण गर्न सक्दछ जुन मुख्य रूपमा केन्द्रीकृत सामाजिक मिडिया प्लेटफार्महरू द्वारा शासित छ।
यदि तपाईं ती उद्यमीहरू मध्ये एक हुनुहुन्छ जो एक निर्माण गर्न चाहानुहुन्छ दुर्लभ जस्तो NFT प्लेटफर्म, तपाईं सामान्य मा blockchain विकास र विशिष्ट मा NFT विकास मा विशेषज्ञता कम्पनी संग सम्पर्कमा हुन सक्नुहुन्छ। उनीहरूले एक आवश्यकता बुझ्नको लागि ध्यान दिन्छन् र तपाईंलाई RFable जस्तै उत्तम NFT बजार निर्माण गर्दछ, ताकि तपाईं मुनाफाको क्रिप्टो स्थानमा सुरू गर्न सक्नुहुनेछ।
सांप्रदायिक समाचार NFT मार्केटप्लेस जस्तो डरलाग्दो